सम्बन्ध Archives - Lokpati.com
Tag - सम्बन्ध
दाम्पत्य जीवनमा पनि एक्लोपन ?
विवाहपछि मान्छेले आफ्नो सुख-दुःख साट्ने अत्यन्तै निकटका भरपर्दो साथी पाउँछन्। श्रीमान् श्रीमती भएपछि उनीहरूले एक अर्कासँग हरेक कुरा साझेदार गर्छन्। एउटाको दुःखमा अर्कोले हात दिने र एउटाको खुसीमा अर्कोले साथ दिने सहयोगी...
प्रेमिकालाई सोध्नै नहुने पाँच प्रश्न
काठमाडौं। भनिन्छ, केटीहरूको मन बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। जुन एकहदसम्म सत्य पनि हो। किनकि केटीहरूको दिमागमा के चलिरहेको छ, कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले त भेटभएको बेलामा केटीहरुलाई आफ्नो प्रेमीले त्यस्ता प्रश्नहरु नै नगरुन्...
प्रेम जीवनका पाँच चरण, जोखिम कति बेला ?
काठमाडौं। मानिसको जीवनमा अनेक अनेक किसिमको अवस्थाहरु आउँछ। त्यसैले त जीवनको आरोह-अवरोहलाई कसैले पनि पूर्वानुमान गर्न सक्दैनन्। हरमानिससँग भेट हुने मानिसहरुको कोसँग कस्तो सम्बन्ध जोडिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन मुस्किल...
पिता किन पूज्य छन् ?
काठमाडौं। पिता, जसलाई बुबा भने भो। पापा भने भो। ड्याडी भने भो। आखिर जे नामले पुकारे पनि सन्तानको सुरक्षा कवच हुन्, उनी।
पिता एक छत हो, जसको आश्रयमा सन्तान हुर्कन्छन्। पिता सन्तानको पालन पोषण र संरक्षणका पर्याय पनि हुन्।...
पति-पत्नीको तालमेलले हुनसक्छ आर्थिक समृद्धि
काठमाडौं। के भनाई छ भने, अक्सर दम्पतीको कलह आर्थिक कारणले हुन्छ। जब घरखर्च र कमाईको अनुपात मिल्दैन। अर्थात, जब कमाई भन्दा खर्च बढी हुन्छ, तब पारिवारिक कलह सुरु हुन्छ। पुग्दो आयस्रोत एवं पैसा छ भने परिवारका इच्छा, चाहना र...
अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध थप तनावग्रस्त
काठमाडौं, ६ असार । अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध थप तनावग्रस्त बनेको छ। परमाणु सम्झौताबाट सुरु भएको यी दुई देशबीचको विवादले यतिबेला खाडी मुलुकहरु समेत चपेटामा परेका छन्।
त्यसमाथि हिजोमात्र इरानले अमेरिकी जासुसी मानवरहित...
नेपाल र भारतको सम्बन्ध जनस्तरमै सुमधुर : मोदी
काठमाडौं, १८ जेठ। नेपाल र भारत सहकार्य उल्झनरहित अघि बढ्ने विश्वास लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वदेश फर्केका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएर शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रसन्न...